जी सिने अवार्ड नेपालमा आयोजना हुने, नेपाली चलचित्रलाई पनि अवार्ड ! | Jukson
बलिउडको चर्चित ‘जी सिने अवार्ड’ यस वर्ष नेपालमा आयोजना हुने भएको छ । आउँदो नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर ८ को बीचमा अवार्ड आयोजना हुने भनिएको अवार्डमा बलिउड सेलिब्रिटीका साथै नेपाली सेलिब्रिटी पनि सहभागी हुनेछन् ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा दुई कलाकारहरु राजेश हमाल र दिनेश डिसीलाई सामेल गरिएको थियो । सो भ्रमणका क्रममा जी टिभीका मालिक तथा भारतीय राज्य सभा सदस्य डा. सुभाश चन्द्रले नेपालमा ‘जी सिने अवार्ड’ आयेाजना गर्ने इच्छा नेपाली कलाकारहरुमार्फत प्रधानमन्त्रीमा पुर्‍याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली तत्काल यसमा सकारात्मक बनेका थिए ।
विश्वका विभिन्न देशहरुमा आयोजना हुने गरेको अवार्ड नेपालमा गर्दा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । अवार्डमा भारतका चर्चित सेलिबि्रटीहरु सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘हिन्दी चलचित्र हेर्ने संसारभरका ८० करोड व्यक्तिहरुले हेर्ने अवार्ड समारोह नेपालमा आयोजना गर्दा भिजिट नेपाल २०२० लाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने छ,’ डीसीले भने ।
अवार्डको विषयमा छलफल गर्न जि टिभीका मालिक सुभास चन्द्र हिजो नेपाल आएका छन् । उनले नेपालमा फिल्म सिटी निर्माणमा पनि लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । डीसीले उनलाई पालुङटार, सल्यानटार, तनहु लगायतका सम्भावित स्थानहरुमा अवलोकनका लागि पुर्‍याएका थिए । सरकारले निर्माण गर्ने फिल्म सिटीभन्दा यो भिन्दै हुने डीसीले बताए ।
नेपाली फिल्म विधा थप्ने घोषणा
खर्च नेपालको पनि
भारतीय निजी टेलिभिजनको कार्यक्रम भए पनि यो अवार्ड समारोहका लागि नेपालले पनि खर्च वहन गर्ने सहमति गरिएको छ । तर, यसमा सरकारले प्रत्यक्ष खर्च नगर्ने विभिन्न विज्ञापनदाताहरुमार्फत खर्च जुटाइने डीसीले जानकारी दिएका छन् ।
नाटक ‘अटलबहादुरको आतंक’ मञ्चन सुरु
ट्रिपरको ठक्करबाट घाईते टीनालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगियो
हिट हिट’ जोडी बने अनु र मिस्टर प्रिन्स